» इन्डियन लाहुरे र उहाँको श्रीमती अन्तिम पटक एकैसाथ मिडियामा ,दुबैको आँसु रोकिएन ,रुदा रुदै सदाको लागि छुट्टीए ! (भिडियो सहित हेर्नुहोस) इन्डियन लाहुरे र उहाँको श्रीमती अन्तिम पटक एकैसाथ मिडियामा ,दुबैको आँसु रोकिएन ,रुदा रुदै सदाको लागि छुट्टीए ! (भिडियो सहित हेर्नुहोस) – हाम्रो खबर
इन्डियन लाहुरे र उहाँको श्रीमती अन्तिम पटक एकैसाथ मिडियामा ,दुबैको आँसु रोकिएन ,रुदा रुदै सदाको लागि छुट्टीए ! (भिडियो सहित हेर्नुहोस)
admin 2191 Views
स्मीतालाई जनकपुरका नारायण यादव भन्ने ब्यक्तिले सुरुमा मिठा कुरा गरे । स्मीतालाई विश्वासमा पारे । आफ्नो सानो छोरीलाई स्कूल लैजान भनेर घरवाट निस्केकी स्मीता अन्तत घर छोडेर नारायणलाई भेट्न काठमाडौ गइन् । उनी हराएपछि स्मीताका श्रीमानले खोजी गरे । एक महिना पछि उनी काठमाडौको एक होटलमा नारायणसंग फेला पारे । भिडियो हेर्नुहोस ***भिडियो हेर्न यहाँ थिच्नुहोला..***